25 Sano oo Somaliland dhisnayd iyo Ifafaalaha Xilligan Muuqda | Awdalpress.com
25 Sano oo Somaliland dhisnayd iyo Ifafaalaha Xilligan Muuqda
Waxa Daabacay staff-reporter on Jan 9th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Maanta waxa Somaliland ka taagan qabyaalad xadhkaha goosatay, khalkhal siyaasadeed iyo dhawacyo kale oo laf jab gaadhsiiyay dawladnimadii iyo hay’aadkii sharciga ama kuwii kaleba. Taasi oo aan cidna ka qarsoonayn ayaa ii iftiimisay in hankii iyo himiladii Somaliland ku taamaysey ay u baahan tahay badbaado deg deg ah.
Waxa sida cadceedda inoogu muuqata, fashilaaddii iyo fool xumadii ka dhalatay doorashooyinkii dowladaha hoose ee Somaliland, intii ka danbeeyseyna waxa innoo muuqata, inaan sees qaran oo innoo tolani jirin, ee dadkii lagu soo ooday guri qabyaaladeed oo dhadhaab ah, kaasi oo shacabkii maanta ku jiro.
Arrimahaas iyo kuwa kale oo maalin kasta dhacayaa waxa ay calaamad u yihiin khatar innagu soo fool leh, oo shinkeedi buuxo. Hubka qudha ee dawaddu illaa iminka kaga hortegaysaana waa xumad jebin iyo Xaaji iyo Guurtiyay ku kala dhaaro.
Dawladdii iyo hoggaankii Somaliland ee aynu u dooranay inay la yimaddaan ra’yi iyo xal duruufaheenna lagu furdaamin karo, isla markaana abuurta qaran iyo hayado u adeega ma hayno. Haddiise la heli lahaa waxa si macquul ah xal loogu heli kari lahaa boogaha inna ragaadiyay oo dhaqan sida: Qabyaaladda, Qaraaba kiilka, Musqmaasaqa iyo afmiisharnimada. Hubaal way baaqatay, waanay ka sii darayaan boogahaa aan laga soo waaqsan karini. Waxa nasiib darro ah, inaanay khatartaa afka inagu soo kala qaadday u muuqan dowladeenna. Madaxweenahaynu khudbaddii sanadka ee uu golayasha ka horjeediyay , waxay ahayd cajelad ay soo duubeen dad col iyo abaar mooga oo waayaha iyo wacyiga aynu ku jiro ka dhega la’. Dowladdu wax qabatay: cashuur gurtay, guraya dhistay, wadooyin wax ka qabatay, shirkadda shidaal heshiisyo la gashay waxyaabo kale oo badan samaysay.
Laakiin madaxweynaha iyo dowladda waxa looga fadhiyaa inay tilmaamaan waxa dhiman si wax looga qabto. Dowladii Siyad Barre ee madaxwenaheenu wasiirka qorsheynta iyo maaliyadda uu ka ahaa, waxa loo yaqaanay kacaankii JID iyo JARDIINO, mashariic wax ku ool ahna way fuliyeen, laakiin asaaskii qarannimo may adkayn amma may dhisin. Wixii muuqday ee ay dhiseenna maalin iyo habeen ayay ku dumeen.
Haddaba, waa in aan inagu shicib iyo dowladba isu sheegnaa in khatar weyn dalkeena iyo qaranimadeennii ku jirto ama ku soo fool leedahay. Waxana aynu ku badbaadi karaa:
Dowladda oo ka baxda dhufayska korsi ilaaliska iyo inay ku mashquusho tabihii iyo xaaladihii ay xukunka u haysan lahayd, kuna bedesha dadaal naf huris ah oo qaranka dhidibadda loogu aasayo.
In dowladda iyo haya’daha distooriga ahi xoog saraan sidii dadka Somaliland loo midayn lahaa, lana abuuro qorshe ku wajahan sidii qabyaladda loo xakamayn lahaa. In kursiga madaxwenaha, wasiiradda, iyo masuuliinta kale aanay noqon, mid qola sheegato, ama qolo lagu sheego
Waa in dhibaatooyinka taagan ee distooriga ah, sida khilafaadka Kulmiye hadda taagan, kii baabiyay xisbigii Udub iyo kii Ucid-ba, halka ay ciladdu lug ku leeday la taxliiliyaa lana keenaa fikir lagu sabato bixin karo
Waa in si wadajir ah looga tashado geeddi socodka dimuqraadiyadda, qorshe fulineedna la ballaysimo, inaga oo ka faaii’daysanayna khaladaadkii aynu hore u galay iyo waayo aragnimadii dheerayd
Waa in kalsoonida shicibka reer Somaliland lagu soo celiyo laguna hanto iyada oo run laga sheegayo waayaha inagu xeeran, hadday tahay arrimaha gudaha, xidhiidhka caalamiga, ka gobolka, iyo siyaasadda iyo straatejiyadda la qorsheeyay in lagu maareeyo
Waxa lagama marmaan ah talo wadaag iyo rayi urursiga oo guul lagu gaadhi karo
Waa in dowladdu si cad oo aan mugdi ku jirin u soo ban dhigtaa heshiisyada ay la gelayso qaybo ka tirsan beesha caalamka amma shirkado madani ah ammaba caalami ah, haddii ay tahay heshiisyada lala geleyo shirkadaha khayraadka dabeeciga ah, heshiisyada lagu bixinayo hantida dadweynaha, wershedo, guryo iyo xuquuq adeegga. Waa in heshiisyada la dhigo barta internet ka ee dowladda ama joornaalka dawladda lagu soo qoraa, si cid kasta uga bogoto, runtuna ka dheerayso nuxnuxda iyo dacaayadaha.
Maaddaama 25 sano ka dib aynu marayno marxaladdaa aan ka soo sheekaynay ee aadka u adag, oo galaafan karta qaranimadeena, dabrina karta himiladeena iyo horumarka aynu higsanayno, waa in si dhakhso ah loo abaabulo shirkii wada tashiga ee hore loogu dhawaaqay. Dowladda iyo xisbiyada qarankuna waa inay iyaga oo isku hadaf ah galaan abaabul arrintaa ku wajahan, kana midha dhaliyaan sidii loo heli lahaa talo waafiya oo dalka iyo dadka wax tarta. Adduunkuna uu innoogu soo joogsado.
Mohamed (Indheergarad aammus dhibay)
This post has been viewed 2500 times.